ओलीजी, नक्सा र राष्ट्रवादलाई तुच्छ स्वार्थका निम्ति ढाल नबनाउनुहोस् !
बिहीबार , १८ असार २०७७
सोमबार असार १५, २०७७/ Monday 06-29-20
ओलीजी, नक्सा र राष्ट्रवादलाई तुच्छ स्वार्थका निम्ति ढाल नबनाउनुहोस् ! तपाईंको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पदको गरिमा र मर्यादा मात्र गुमेको छैन, देशलाई अपूरणीय कूटनैतिक क्षति पुगेको छ ।
तपाईंलाई भूमि फिर्तासँग होइन, देशका गम्भीर मुद्दा र समस्यासँग होइन, आफ्नो कुर्सीसँग मात्रै मोह छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ र जग्गा फिर्ता आउन सक्ने कूटनैतिक ढोकाहरू आफै बन्द गर्न तम्सिनुभएको छ । हामीलाई गुमेको भूमि चाहिएको हो, कसैको कुर्ची बचाउन कुनै देशसँग सोझो द्वन्द्व या दुश्मनी चाहिएको होइन ।
नक्सालाई ढाल बनाउनुअघि यत्ति त याद गर्नुहोस्:
-संसदीय समितिले एकमतले नक्सा सच्याउन दिएको निर्देशन तपाईंले 'भूमि फिर्ता ल्याउने हो, नक्सा त केही पनि होइन' भनेर धेरै महिना टार्नुभो ।
-नक्सा सार्वजनिक गर्न सदनदेखि सड़कसम्मको तीव्र दबाब थियो, समर्थन थियो ।
-सरिता गिरी प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छैन । अन्यले त तपाईंले जस्तै नक्साको पक्षमा भोट दिएकै हुन् ।
-तपाईंमाथि सच्चिन या ठाउँ खाली गर्न दबाब शुरू भएको नक्साका कारण होइन, नक्साभन्दा धेरै अघि राष्ट्रपति भन्ने संस्थालाई खेलौना बनाएर लहड़मा ल्याएको अध्यादेशका कारण हो । पूर्व प्रहरी र सांसदलाई लकडाउनकै बीचमा मान्छे उठाउने धन्दामा लगाउने तपाईंको निकृष्ट खेलका कारण हो ।
-सबैलाई जोडेर कोभिड़का आर्थिक, सामाजिक र स्वास्थ्यगत समस्याहरूसँग लड्नुपर्ने बेला पार्टी फुटाउने धन्दामा लाग्ने, खरिदलगायतका अनियमिततालाई आफै ढाकछोप गर्ने र मैंमात्रै सर्वज्ञ हुँ भन्ने अहङ्कार पाल्ने स्वभावले गर्दा हो ।
-लोकतान्त्रिक दलको अध्यक्ष हुँ भन्ने र दलको बैठक बोलाउन समेत नदिने, बल्लबल्ल आयोजित बैठकमा एकोहोरो आत्मप्रसंशा मात्रै गर्ने र अरूलाई नसुन्ने तानाशाही प्रवृत्तिले गर्दा हो ।
-सबैभन्दा ठूलो कुरो, कुरो मात्रै गर्ने तर काम नगर्ने तपाईंको दिक्कलाग्दो चरित्र र चर्को भाइभतिजावाद हो ।
-आफू पढ्दै नपढ्ने तर अरूलाई नपढेको आरोप लगाउने तपाईंको बानीले हो । एमसिसीमा तपाईंले पचास अर्बको ठाउँमा पाँच सय अर्ब आउँदै छ भनेर झुटो तथ्याङ्कमा भाषण गर्नुभो तर यसको विरोध गर्नेहरूलाई पढ्दै नपढेको आरोप लगाउनुभो । तपाईंले आजसम्म कुनै एउटा गम्भीर विषयमा तथ्यपूर्ण मन्तव्य दिनुभएको छैन ।
-तपाईंका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटामाथि उठेको त्यत्रो भ्रष्टाचारको मुद्दालाई तपाईंले छानबिनसम्म हुन दिनुभएन । उल्टो त्यो अडियो नै नक्कली भएको भाषण गर्नुभो ।
-अहिले त सार्वजनिक खरिद ऐन नै सच्याएर आफू खुशी सोझै खरिद गर्न पाउने संशोधन संसदमा ल्याउन कस्सिनुभो ।
-वाइडबड़ीबारे संसदीय समितिले गरेको अध्ययनलाई तपाईंले स्वीकार गर्नुभएन । आफूखुशी आयोग बनाउनुभो । उसको म्याद सकिएको दुई वर्ष भयो । तलबभत्ताबाहेक त्यसले के प्रतिवेदन दियो भन्ने कहिल्यै सार्वजनिक गर्नुभएन ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, लेखेर नसकिने कारणहरू छन् जसलाई तपाईं एउटा नक्साले छेक्न खोज्दै हुनुहुन्छ । तपाईंकै दलका अधिकांश सदस्यको असन्तुष्टिलाई 'दिल्ली'सँग जोडेर तपाईंले आफ्नै सहकर्मीलाई दलालका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । मानौं प्रचण्डदेखि माधव नेपालसम्म भारतीय दलाल हुन् र तपाईं एक्लो राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ । देशकै अस्तित्व र स्वाभिमानमाथि पनि यो गहिरो प्रश्न हो ।
र, राष्ट्रवाद भनेको के हो ? तपाईंलाई थाहा होला नै, राष्ट्रवाद भाषण र उत्तेजना होइन । यो त कूटनैतिक चातुर्य र साधनस्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्दै राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण हो, जथाभावी बोलेर कुर्सीको संरक्षण होइन ।
कोरोना संक्रमणको अवस्था कस्तो छ ? कसरी बच्न सकिन्छ ? – डा. रवीन्द्र पाण्डे
कसैले भन्दैमा प्रधानमन्त्री पद पाउने र छाड्ने होइन
पुलिंग मेथडबाट कोरोना संक्रमणको पिसिआर टेस्ट गरौँ
हिमालय एयरलाइन्सका पाइलट र एयरहोस्टेसमा पनि देखियो कोरोना संक्रमण
राष्ट्रपति भण्डारीले गरिन् बजेट अधिवेशन अन्त्य
चार महिनादेखि रोकिएको श्रम स्वीकृति आजदेखि खुला
नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित, बालुवाटारमा ओली र प्रचण्डबीच ‘निर्णायक वार्ता’
म्यानमारमा पहिरोमा परी मृत्यु हुनेको संख्या ११३ पुग्यो
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कोरोना संक्रमणबाट ४५ दिने शिशुको मृत्यु
माइतीघर मण्डलामा युवाको नारा– ‘आज होइन भोलिलाई, हाम्रो समर्थन ओलीलाई’
एक महिनाकै ५० हजार बील आएपछि तनावमा यी नायिका
नेपालबारे अमेरिकाको डर लाग्दो प्रतिवेदन, आतंकवादी आक्रमण हुन सक्ने